Rooble oo Kenya u caddeeyay in go’aanka badda ay leedahay ICJ | Dhacdo
Home Wararka Maanta Rooble oo Kenya u caddeeyay in go’aanka badda ay leedahay ICJ
Rooble oo Kenya u caddeeyay in go’aanka badda ay leedahay ICJ
Ra’iisal Wasaaraha Somaliya, Maxamed Xuseen Rooble oo booqasho rasmi ah ku jooga dalka Kenya ayaa maanta oo talaado ah waxaa isaga iyo wafdigiisu ay Aqalka Madaxtooyada ee magaalada Mombasa wadahadal laba-geesood ah kula yeesheen Madaxweyne Uhuru kenyatta iyo masuuliyiin sarsare oo ka tirsan dalka Kenya.
Labada dhinac ayaa ka wada hadlay dhowr arrimood oo istiraatiiji ah oo danaha guud ka dhaxaysa Somaliya iyo Kenya, waxaana ugu muhiimsanaa soo celinta xiriirkii diblomaasiyadeed ee Nairobi iyo Muqdisho.
Ra’iisal Wasaare Rooble ayaa xusay in booqashadiisu ay tahay mid lagu adkaynayo xiriirka labada dowladood, oo ay ka dhaxeeyaan arrimo badan, kuwaas oo u baahan in laga wada xaajoodo.
Ra’iisal Wasaaraha Somaliya ayaa adkeeyey in arrinta muranka badda ee u dhaxeeya Somaliya iyo Kenya arrin aysan haba yaraatee wax wadahadal ah ka geli Karin, isla-markaana lagu xallin doono go’aanka Maxkamadda Caddaaladda Adduunka ee ICJ.
Previous articleFaah faahin: Qarax dad badani ku dhinteen oo ka dhacay Gobolka Mudug
Next articleQoorqoor oo gudbiyay qayb ka mida musharaxiinta u tartamaysa Aqalka Sare